Fanamafisana ara-pientanam-po amin'ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 21/07/2021 22:02 | Psychology
Ny fanamafisana ara-pientanam-po ao amin'ny mpivady dia ara-dalàna sy mahazatra kokoa noho ny fiheveran'ny olona. Mikasika ny fanodikodinana ara-tsaina ireo mpivady ireo mba hiasan'izy ireo araka izay itiavan'ny mpanafika azy.
Ao ambadik'io fanodinkodinana na fanodinkodinana io dia matetika misy olona tsy manana filaminana sy fahatokisan-tena miharihary. Ny famindram-po ara-pientanam-po ao amin'ny mpivady dia tsy azo avela amin'ny toe-javatra rehetra ary zava-dehibe ny famaranana azy.
1 Fanamafisana ara-pientanam-po amin'ny mpivady
2 Ahoana no ahafantaranao fa ny blackmail amin'ny fihetseham-po dia mitranga ao amin'ny mpivady
3 Ahoana ny fomba hiatrehana ny faneriterena ara-pientanam-po amin'ny vadinao
Araka ny efa nohazavaintsika tetsy ambony, ny fanararaotana ara-pientanam-po dia karazana fanodinkodinana olona iray mankany amin'ny iray hafa. Amin'ny alàlan'ny fanodikodinana toy izany dia mahavita manafoana ilay olon-kafa ilay mpampijaly ary mampanao azy araka izay itiavany azy. Izany dia miteraka fifandraisan'ny mpivady amin'ny poizina amin'ny fahavoazana ara-pihetseham-po mahazo ny iray amin'ireo antoko.
Ny fifandraisana salama dia tsy maintsy mifototra amin'ny soatoavina manan-danja toy ny fitiavana, fanajana na fifandraisana. Tsy mety misy karazana fandrahonana na fandrahonana amin'ny sehatra ara-pientanam-po. Raha sanatria mitranga tsy tapaka ny fanalam-baraka ara-pientanam-po, ny lohahevitra dia tokony hamarana ny fiarahana ary manapaka haingana ny fatiantoka azon'izy ireo.
Ahoana no ahafantaranao fa ny blackmail amin'ny fihetseham-po dia mitranga ao amin'ny mpivady
Indraindray dia tsy mora ny mamantatra ny fanarahan-dia ara-pientanam-po ao anatin'ny mpivady, satria ny olona manodikodina dia tsy mahafantatra tanteraka fa manao valin-draharaha amin'ny olon-tiana. Ireto ny sasany amin'ireo famantarana mazava indrindra momba ny fanaovana blackmail amin'ny fihetseham-po:
Ny manipulator dia mahatonga ny mpiara-miasa aminy ho meloka noho ny zavatra nataony ka mahatsiaro tena ho meloka ianao ary manana fotoana tena ratsy.
Milalao ny tra-boina amin'ny zavatra rehetra izy indrindra hisorohana ny foto-kevitra tsy hiala aminy.
Matetika izy no manao fampanantenan-javatra rehetra izay tsy notanterahiny taty aoriana. Ireo fampanantenana ireo dia ho an'ny tanjona na tanjon'ny fitazonana ilay olon-tianao eo anilanao.
Ny fampiasana fandrahonana dia mitohy eo amin'ny fifandraisana mba hiteraka tahotra iray amin'ny olon-tiana, ankoatry ny famerana ny fahafahan'ny olona voalaza.
Ny iray amin'ireo marika mazava indrindra amin'ny fanefana ny fihetsem-po dia ny fahanginana. Nanapa-kevitra ny hangina ny mpanera haneho ny hatezerany ary mandà tsy hiteny amin'ny mpiara-miasa aminy. Izy io dia endrika fanararaotana ara-tsaina izay manimba tsikelikely ilay olona iharan'ny herisetra.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny faneriterena ara-pientanam-po amin'ny vadinao
Voalohany indrindra, tandremo fa misy ny toe-draharaha manoloana ny fampanjonoana olona eo amin'ny fifandraisana. Manomboka eto dia zava-dehibe ny manatona olona matihanina mahay manampy ny olona misy poizina.
Tsy azo avela amin'ny toe-javatra toy izany fa mifehy ny mpivady ho zavatra mahazatra. Ny tsirairay dia tsy maintsy afaka ary manana ny toerany manokana ao anatin'ny fifandraisana.
Ny fampitahorana dia tokony hitsahatra tsy hisy ao anatin'ny mpivady. Misy andiana soatoavina tsy maintsy misy eo amin'ny fotoana rehetra, toy ny fanajana na fifandraisana.
Ny olona manodinkodina dia tsy maintsy te hiova ary hahatsapa fa tsy afaka mampiasa fanamaintanana ara-pientanam-po izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Fanamafisana ara-pientanam-po amin'ny mpivady
Ireo tolo-kevitra vaovao ho an'ny morontsirak'i Women'Secret